Abakhiqizi Bezikhwama Zokuhlanza, Abahlinzeki - I-China Laundry Bag Factory
Okokuqala kufanele wazi ukuthi ungenza ngezifiso isethi noma ucezu olulodwa. Lesi sikhwama sokuhlanza imesh siqinile, siqinile futhi siyagezeka ukuvikela izingubo zakho. Isebenzela zonke izinhlobo zokuwashwa, kufaka phakathi izingubo zangaphansi, amabhuleki, amasokisi, izinto zabantwana, amahembe wokugqoka.
Isikhwama Sokuhlanza Sokudweba
Lezi zikhwama ezinkulu ze-Drawstring Mesh Laundry zenza kube lula ukugcina nokuphatha izingubo. Yenziwe ngenayiloni ne-polyester. Izinto eziphakathi nendawo nangaphansi yi-polyester nenye indawo enezikhala yinayiloni, ngakho-ke inamandla futhi inokwethenjelwa.
Ukotini Laundry ubhaka
Okokuqala, isikhwama sethu esikhwameni sokuhlanza ukotini senziwe ngezifiso, okusho ukuthi ungaba nomklamo nosayizi wakho. Lesi sikhwama sokuwasha senziwe ngezinto zangaphansi eziqinile ezinamahlombe aguquguqukayo. Isikhwama sokuwasha siwumbala wemvelo.